काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपालका उद्योगहरुको औद्योगिक गतिविधिको अध्ययन गरेर औद्योगिक स्थिति प्रतिवेदनको तेस्रो अंक सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा उत्पादनमुलक उद्य…
ग्लोबल आइएमई बैंक र बीओकेबीच मर्जर सम्झौता, चुक्ता पूँजी ३४ अर्ब ४१ करोड
काठमाडौँ । ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू (बीओके) बी मर्जर सम्झौता भएको छ। आज बिहान होटल याक एण्ड यतिमा आयोजित एक समारोहका बीच मर्जर सम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झ…
वाणिज्य बैंकहरुमा २३ अर्ब निक्षेप थपियो, तीन अर्बले बढ्यो कर्जा लगानी
काठमाडौँ । वाणिज्य बैंकहरुमा जेठ महिना शुरु भएपछि कूल निक्षेप २३ अर्बले बढ्दा कर्जा लगानी ३ अर्बले बढेको छ । नेपाल बैंकर्स संघले आज प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत साता (जेठ २७ गते) सम्म कूल निक्…
इन्भेष्टमेन्ट र मेगाबीच मर्जर सम्झौता, नविल, ग्लोबल आईएमई र एनआईसी एशियालाई टक्कर
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकबीच शुक्रबार मर्जरका लागि सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डे र मेगा बैंकका अध्यक्ष भाजबहादुर शाहले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका…
वाणिज्य बैंकहरुमा बीस अर्ब रुपियाँ थपियो निक्षेप, पाँच अर्बले बढ्यो कर्जा लगानी
काठमाडौँ । वाणिज्य बैंकहरुमा जेठ महिना शुरु भएपछि कूल निक्षेप २० अर्बले बढ्दा कर्जा लगानी ५ अर्बले बढेको छ । नेपाल बैंकर्स संघले आज प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत साता (जेठ २० गते) सम्म कूल निक्षेप ७…
तपाईँको आम्दानी कति ? यस्तो छ करको दर
काठमाडौँ । तपाईँले एक वर्षमा के कति कर तिर्नुपर्ला ? हिसाब गर्नुभएको छ । यदि छैन भने तपाईँलाई हामीले जानकारी दिने प्रयास गरेका छौँ । सरकारले यही जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्यो । अर्थम…
कुनै अवरोध नभए इन्भेष्टमेन्ट र मेगा बैंकबीच मर्जर हुन्छः पाण्डे
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेले कुनै अवरोध नभए मेगा बैंकसँग मर्जर हुने बताएका छन् । कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा उनले मेगासँग मर्जरको कुराकानी अघि बढेको बताउँद…
‘बजेट उत्पादन र निर्यातमैत्री आएको छ, अब हामी लाखौं टन सिमेन्ट र स्टिल निर्यात गर्नसक्छौं’
काठमाडौं । शंकर ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक एवं नेपालको एक ठूला उद्योगपति साहिल अग्रवालले सरकारले आगामी अर्थिक बर्षका लागि ल्याएको बजेट स्वदेशी उत्पादन र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको रहेको भन्दै यसको स्वागत गरेका छ…
वाणिज्य बैंकहरुमा १३ अर्ब थपियो निक्षेप, कर्जा लगानी ७ अर्बले बढ्यो
काठमाडौँ । वाणिज्य बैंकहरुमा जेठ महिना शुरु भएपछि कूल निक्षेप १३ अर्बले बढ्दा कर्जा लगानी ७ अर्बले बढेको छ । नेपाल बैंकर्स संघले आज प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत साता (जेठ १३ गते) सम्म कूल नि…